Heshiis la dhex dhigay beelihii ku dagaalay gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Heshiis la dhex dhigay beelihii ku dagaalay gobolka Mudug
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Taaroge ee duuleedka magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya inuu soo idlaaday kullan saacado badan qaatay oo ay halkaasi ku yeesheen odayaasha dhaqanka, culimadda iyo waxgaradka kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Uljeedka kulankaasi ayaa sida la sheegay ahaa sidii loo joojin lahaa xiisadaha ka dhex aloolsan maleeyshiyo beeleed dhawaan ku dagaalay deegaanka Taaroge ee duuleedka magaalada Gaalkacyo.
Odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo culimadda kullankaasi ka qeyb gashay ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay xabad joojin rasmi ah kala dhex dhigaan dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Taaroge, iyagoona soo saaray dhowr qodob oo xiisada labada dhinac dejin karta, waxaana qodobadaasi ka mid ahaa:-
1- In labada dhinac ay dhaqan geliyaan xabad joojinta lagu heshiiyay.
2- In labada dhinac ay kala qaadaan ciidanka is-hor fadhiya oo xiisadda sii kicin karta.
3- In labada dhinac ay sida ugu dhaqsiyaha badan bilaabaan wadahadal rasmi ah iyo nabadeyn.
Ugu dambeyn, mas’uuliyiinta kulankaasi ka qeyb gashay ayaa baaq u diray dadka u dhashay gobolka Mudug iyo maamulada Galmudug iyo Puntland, waxayna ugu baaqeen inay ka qeyb qaataan hirgelinta nabadda iyo heshiiska labada dhinac la dhex dhigay.